Azafady atsipazo aho - Vakio Manhwa, Manhua, Webtoon, Webcomics, Manga, Comics an-tserasera
Atsipazo aho azafady Average 4.3 / 5 avy amin'ny 18
N / A, manana fomba fijery 33.5K
tantara an-tsehatra, Fantasy, Romance
Vakiana ianao Atsipazo aho azafady, mahafinaritra manhwa.
Adele dia natsangana ho solon'ny vehivavy maty noho ny aretina tsy fahita firy. Niasa tamin'ny fiainany iray manontolo izy mba ho tiavina, fa raha vao teraka ny zandriny vavy dia nilaozana. Avy eo teny an-dàlan'i Adele nankany amin'ny fanambadiana voalamina dia novonoin'ny fahavalo miafina izy. “… Nofinofy ve ity?” Fa rehefa nanokatra ny masony izy dia niverina 3 taona lasa! Satria voatokana ho nilaozana izy rehefa teraka ny zandriny vavy, amin'ity indray mitoraka ity dia manandrana miaina amin'ny fomba tiany izy, saingy mandeha hatrany ny zava-drehetra. “Tsy liana amiko ve ianao?” Ary manenjika azy hatrany ny Knight tsy mifono mistery mainty…
Chapter 56	Jolay 28, 2021
Chapter 55	Jolay 21, 2021
Chapter 54	Jolay 12, 2021
Chapter 53	Jolay 7, 2021
Chapter 52	Jolay 2, 2021
Chapter 51	Jolay 2, 2021
Chapter 50	Jona 24, 2021
Chapter 49	Jona 24, 2021
Chapter 48	Jona 24, 2021
Chapter 47	Jona 13, 2021
Chapter 46	Enga anie 5, 2021
Chapter 45	Aprily 28, 2021
Chapter 44	Aprily 15, 2021
Chapter 43	Febroary 24, 2021
Chapter 42	Febroary 21, 2021
Chapter 41	Febroary 21, 2021
Toko 40 - Faran'ny vanim-potoana 1	Janoary 12, 2021
Chapter 39	Janoary 4, 2021
Chapter 38	Desambra 15, 2020
Chapter 37	Desambra 15, 2020
Chapter 36	Desambra 15, 2020
Chapter 35	Novambra 26, 2020
Chapter 34	Novambra 22, 2020
Chapter 33	Novambra 15, 2020
Chapter 32	Novambra 15, 2020
Chapter 31	Novambra 15, 2020
Chapter 30	Novambra 9, 2020
Chapter 29	Novambra 9, 2020
Chapter 28	Novambra 6, 2020
Chapter 27	Oktobra 8, 2020
Chapter 26	Oktobra 8, 2020
Chapter 25	Oktobra 8, 2020
Chapter 24	Oktobra 8, 2020
Chapter 23	Oktobra 8, 2020
Chapter 22	Oktobra 8, 2020
Chapter 21	Oktobra 8, 2020
Chapter 20	Oktobra 8, 2020
Chapter 19	Febroary 25, 2021
Chapter 18	Aogositra 29, 2020
Chapter 17	Aogositra 29, 2020
Chapter 16	Aogositra 29, 2020
Chapter 15	Aogositra 29, 2020
Chapter 14	Aogositra 29, 2020
Chapter 13	Aogositra 29, 2020
Chapter 12	Aogositra 29, 2020
Chapter 11	Aogositra 29, 2020
Chapter 10	Aogositra 29, 2020
Chapter 9	Aogositra 29, 2020
Chapter 8	Aogositra 29, 2020
Chapter 7	Aogositra 29, 2020
Chapter 6	Aogositra 29, 2020
Chapter 5	Aogositra 29, 2020
Chapter 4	Aogositra 29, 2020
Chapter 3	Aogositra 29, 2020
Chapter 2	Aogositra 29, 2020
Chapter 1	Aogositra 29, 2020
Septambra 12, 2020
Izaho dia villainess arts martial fa izaho no matanjaka indrindra!
Vady mangatsiaka - tsy mora ny mampijaly azy
Febroary 25, 2021